Sunday, 05 December 2010 09:32	नागरिक
पवित्रा सुनार, काठमाडौं, मंसिर १९- वीर अस्पताल फिमेल सर्जिकल वार्डमा एक बिरामीमा प्रयोग गरिएको सलाइनमा लेदो भेटिएको छ। अस्पताल परिसरमै रहेको जनस्वास्थ्य सहकारी औषधी पसलबाट किनिएको भारतीय आरएल कम्पनीको सलाइनमा लेदो पाइएको हो।
एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरेकी दाङकी हिमकला खनाललाई दिइएको सलाइनमा शुक्रबार लेदो भेटिएको आफन्तले जनाए। सलाइन पाइपबाट जीउमा प्रवेश नगरेपछि हेर्दा लेदो पाइएको उनीहरूले बताए। 'सलाइन चढेन, बोतलभित्र लेउजस्तो पदार्थ देखियो,' हिमकलाले भनिन्।
सलाइनमा लेदो देखेपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै नर्स र चिकित्सकले रोकेका थिए। 'हामीले तुरुन्तै अर्को सलाइन दियौं,' उपचारमा संलग्न डा. प्रमोदकुमार यादवले भने।
सलाइन लगाएलगत्तै वाकवाकी लाग्ने, हातखुट्टा झम्झमाउने, अनुहार, हातखुट्टा सुन्निनेलगायत समस्या आएको बिरामी हिमकलाले बताइन्।
चिकित्सकहरूले सलाइनमा देखिएको पदार्थ एक प्रकारको लेउ भएकाले बिरामीका लागि खतरापूर्ण भएको बताए। डा. यादवका अनुसार यस्तो सलाइन प्रयोग गर्दा रगत जम्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र बिरामीको ज्यानै जानसक्ने समस्या देखिन्छन्। 'संक्रमण बढ्यो भने बिरामीको ज्यानै जान सक्छ,' उनले भने। उनका अनुभवमा पछिल्ला दिनमा आरएल कम्पनीको सलाइनमा पटकपटक यस्ता समस्या देखिएका छन्।
प्रयोग अवधि सकिए पनि बाहिर 'नयाँ मिति' राखेको अवस्थामा यसरी लेदो हुनसक्ने उनले बताए। जनस्वास्थ्य सहकारीका कर्मचारीका अनुसार बोतल चुहिएमा या सलाइन घाममा राखेमा यस्तो समस्या आउनसक्छ। 'हामीले स्टोरमै राखेका छौं, चुहिने छ भने बेच्दैनौं, कसरी त्यस्तो भयो?' जनस्वास्थ्य सहकारीका कर्मचारीले भने।
औषधी व्यवस्था विभागका प्रमुख राधारमण प्रसादले सही तापमा नराख्दा र ढुवानीको क्रममा हुने चुहावटले यस्तो भएको हुनसक्ने बताए। 'यस्ता सामान बिक्रेताले हेरेर मात्र वितरण गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको हुनसक्छ,' उनले भने, 'जसले बिक्री गर्‍यो, उसकै कमजोरी हो।'